Nhau - mashandisiro ekushandisa 20ft mudziyo wekusimudza
Nhasi tinoita kukurumbira kweruzivo, chikamu cheSide Loader Trailer
Kurutivi Loader Rori ine akati wandei mativi
1. Towira padivi litre yetrailer, tinogona kusarudza kupihwa simba ne (PTO), kana isu tinogona kusarudza kushandisa injini yakazvimirira kupa simba. Idzi nzira mbiri dzemagetsi dzinopa simba kune iyo crane padivi remudziyo. Mumamiriro ezvinhu akajairika, kana simba racho risina kubatana netarakita, haigone kushanda
2. Hydraulic 37-ton mudziyo padivi yekusimudza crane. Aya ma crane anoiswa pamativi ese eiyo mudziyo wedivi lifte chassis, uye anotamisa zvinhu kuburikidza ne hydraulic cylinders uye hydraulic tubing kuti uone iyo yekusimudza mashandiro eiyo crane.
2. Magetsi. Injini yedhiziri kana injini yedhiziri yakaiswa pane tirera yeimwe neimwe crane inopa simba sosi yemota yese uye iyo crane. Ehe, isu tinogona kazhinji kuona iyo PTO inotakurwa neyedu mota kutora simba.
4. Mushure mekunge mota yaendeswa kunzvimbo yakakodzera, iyo semi-tirera yekumusoro yekumakiti inomira inogona kutakura huremu hwemudziyo unopfuura matani makumi matatu nemanomwe, uye huremu hwekugadzira hunogona kunge huve matani makumi masere, asi nekuda kwehuremu hushoma hwemudziyo , isu tinowanzo taura kuti huremu huremo hwechassis matani makumi mashanu, pamwe nekurema kweiyo crane pachayo. Uye zvakare, yemuenzaniso uyu, isu takashongedzerwa neremote control seyakajairwa. Remote control ine joystick uye mabhatani. Pane nzira mbiri dzekubatanidza, imwe ndeyekubatanidza waya, imwe yacho kubatana nezviratidzo zveredhiyo, kuitira kuti igone kuitwa nyore. Anoshanda anofamba achitenderedza mudziyo panguva yekushanda, izvo zvinofambisa mashandiro etiraki kuti aone kusimudza nzvimbo kubva kumativi akasiyana uye kunoderedza kuvepo kwenjodzi.
5. Kuvhiya uku ndekwekudzikamisa vafambi vaviri munzvimbo yakavimbika uye yakaoma. Wakashongedzerwa ne2 hydraulic tsoka, iwe unogona kusimudza midziyo inorema kusvika makumi matatu nematanhatu. Kunyangwe iyo outrigger inogona kubatsira kugadzirisa kukwirira pane isina kuenzana ivhu, isu tinotenda kuti zvakachengeteka kushanda panzvimbo yakati sandara, uye zvakare inovandudza chengetedzo yemahara uye mutero muganho kana uchinge waisa midziyo.
6. Midziyo inosimudza cheni. Munguva yekusimudza, ngetani ina dzakagadzikwa kubva kumusoro kweanosimudza mativi kuenda kunzvimbo yakakiyiwa pazasi pemudziyo. Iwe unogona zvakare kusarudza kushandisa yekunze mudziyo chinongedzo chekukiya kugadzirisa maviri makumi maviri-tsoka tsoka. Kana mushandisi achisimbisa kuti iwo maviri-makumbo makumi maviri emidziyo akavharirwa pamwe uye akagadzika, iyo yekumhara inotakura inogona kufambisa mudziyo kunge 40-tsoka yemidziyo. .
Post nguva: Aug-01-2021